China Woodworking square hole drill, Wood drill bit, Woodworking drill, Wood square hole drill factory sy mpanamboatra | Boda
Fitrandrahana lavaka famaritana hazo, fitrandrahana hazo, fitrandrahana hazo, fitrandrahana lavaka vita amin'ny hazo
Boribory lavadavaka vita amin'ny hazo toradroa dia lavaka toradroa manokana ary fandavahana loaka mihidy ampiasaina amin'ny milina tenona toradroa. Raha tsy misy milina toradroa toradroa, mandroroa lavaka maromaro ao amin'ny fantsom-pandihizana ary fandoroana herinaratra miaraka amin'ny fotony, ary avy eo mandondona amin'ny tanany ivelany amin'ny fantsom-bozaka toradroa. Ny fotoana mandondona dia tokony ho miadana.
Tsy azo ampiasaina amin'ny fandavahana herinaratra ny fandavahana lavaka toradroa. Ny fitrandrahana lavaka toradroa dia tokony hampiasaina amin'ny milina fandavahana lavaka toradroa (milina tenona toradroa). Ny boribory lavaka toradroa toradroa dia vita amin'ny tanany eo ivelan'ny afovoan'ny fandavahana. Ny 'drill hole square (core 6mm)' amin'ny fanasokajiana loko ao amin'ilay pejy dia ny afovoany afovoany ihany. Raha manana fandavahana lavaka toradroa dia azonao atao ny mividy azy hisolo azy. Ary ny "boroka lavaka toradroa φ 10 mm" dia napetraka: ny fitambarana napetraka ivelan'ny fotony fandavahana.
Boribory lavaka toradroa dia vita amin'ny vy vy miaraka amin'ny hamafin'ny 56hrc.
Ny savaivon'ny fametahana clamping d = 19 mm. Fitrandrahana hazo ary fandavahana.
BOSENDA Fitrandrahana hazo / fitrandrahana hazo / Fitrandrahana lavaka vita amin'ny hazo misy lohany toradroa, mety amin'ny takelaka hazo matevina, zana-kazo, birao sandwich ary tabilao MDF, ary koa ny karazana bosoa rehetra, hazo mafy, plastika, fingotra, polyurethane, sns.
Ny vokatra dia manana ny famaritana ny fametrahana mazava tsara, ny torolàlana momba ny nikitika ny tenany, ny nify maranitra, ny fanesorana ny puce. Miaraka amin'ny fametrahana afovoany sy ny hafainganam-pandehan'ny kofehy, izay mahatonga azy io hisokatra tsara kokoa sy tsotra kokoa. Ny fanapahana efatra sisiny, izay nanatsara ny fahombiazan'ny fanokafana. Famolavolana fanesorana puce efatra, famaha hexagonal, mora raikitra ny tahony 6.25mm ary mafy kokoa izy io.
(AZA MORA amin'ny metaly metaly)
3PC: 1/4 "(6.4mm), 3/8" (9.5mm), 9/16 "(14mm)
Fonosana: kitapo plastika habe: 23 * 12 * 3cm lanja: 0,57kg
4PC: 1/4 "(6.4mm), 5/16" (8mm), 3/8 "(9.5mm), 1/2" (12.7mm)
Fonosana: kitapo plastika habe: 23 * 12 * 3cm lanja: 0.65kg
4PC: 1/4 "(6.4mm), 3/8" (9.5mm), 9/16 "(14mm), 5/8" (16mm)
Fonosana: kitapo plastika habe: 23 * 12 * 3cm lanja: 0.85kg
5PC: 1/4 "(6.4mm), 5/16" (8mm), 3/8 "(9.5mm), 1/2" (12.7mm)
Fonosana: kitapo plastika habe: 23 * 18 * 3cm lanja: 0.95kg
6PC: 1/4 "(6.4mm), 5/16" (8mm), 3/8 "(9.5mm), 1/2" (12.7mm)
9/16 "(14mm), 5/8" (16mm)
Fonosana: kitapo plastika habe: 23 * 18 * 3cm lanja: 1.1kg
Previous: roulant vita amin'ny vatan-kazo vita amin'ny hazo, fametahana broach hazo, fitrandrahana arbor, fandavahana hazo
Manaraka: Fambolena hazo boribory telo maranitra, fandavahana hazo, fanokafana lavaka hazo, karazana fandavahana rehetra
Fandrafetana hazo maranitra telo boribory, fandrafetana hazo ...
Bitika boribory andriamby, bitika fanily, volo volo ...
Hama elektrika, paingotra elektrika, SDS, Ma ...
Fitrandrahana beton maro miasa, tile vita amin'ny seramika ...